Iyo firita yezvinhu zvekuchenesa mvura inofanirwa kuchinjwa kazhinji. Zvinoita here kuramba uchizvishandisa? Iwe uchanzwisisa mushure mekuverenga
ne admin pane 20-07-09
Iyo firita yezvinhu zvemumba-yakaiswa mvura yekuchenesa inoshandurwa kazhinji. Ndingakwanise kuisuka ndoramba ndichiishandisa? Izvi hazvina kunaka! yekuchengetedzwa kwekushandiswa kwemvura zvachose, Tinotenda kuti dzimba zhinji dzakaisa zvinonatsa mvura. Iyo pombi yemvura inoyerera ...
Tsiva iyo "firita element" yemvura yekunatsa mumba mako. Rangarira kudzoka uye unwe "mvura yakachena"!
Iye zvino mamiriro ehupenyu hwevanhu ari kuita zvirinani uye zvirinani, uye ivo vatanga kuteedzera kunaka kwehupenyu. Kunyangwe iwe uchidya, uchinwa kana kushandisa muhupenyu, unofanirwa kuve neutano, uye kana zvichidikanwa, iwe unoshandisa mimwe michina kubatsira, kuti ugone ...
Chinosuka mvura chinobatsira here? Nei uchiisa PP donje pakutanga? Xinpaez anotora iwe kuti unzwisise iyo pp donje firita
ne admin pane 20-06-03
Mune mazhinji emidziyo yekuchenesa mvura, yekutanga-nhanho firita chinhu chePP donje firita chinhu. Yekutanga-nhanho firita chinhu kwete chete zvinokanganisa chete mvura mhando, asi zvakare zvinokanganisa anotevera matatu-danho kana mana-nhanho filtration maturo uye hupenyu hwe ...